SAWIRRO XUL AH: Kooxda Horseed oo si weyn isugu diyaarineysa horyaalka kubadda gacanta Soomaaliya – Gool FM
SAWIRRO XUL AH: Kooxda Horseed oo si weyn isugu diyaarineysa horyaalka kubadda gacanta Soomaaliya
(Muqdisho) 28 Nof 2017.Kooxda Horseed ayaa si xoogan isugu diyaarineysa horyaalka kubadda gacanta kaa soo bisha soo aadan ka furmi doono garoonka Wiish.
Naadiga lagu naaneyso Cawa iyo Maalin ayaa tababar subax iyo galab ugu diyaar garoobeysa horyaalka, waxaana ay ku sameeyaan garoonka Wiish iyo si la mid ah xarunta degmada Boondheere.
Macallin C/laahi Gaaari oo ah tababaraha kooxda Horseed ee kubadda gacanta ayaa sheegay in naadiga ay dib u dhis ballaanran isku sameysay ayna la soo wareegtay xiddigo kala duwan waa sidoo hadalka u dhigayee.
“Tababarka naadiga waxa uu ka kooban yahay laba qeybood,waxaana ku sameynaa garooomada Wiish iyo Boondheere Waxaan rajeyneenaa in aan ku guuleysano horyaalka billaaban doono ayuu yiri macallin C/laahi Gaari.
Sidoo kale kabtanka Horseed Maxamed C/laahi Saab ayaa isna aaminsan in diyaar garoowga kooxda ay u sahli karto horyaalka kubadda gacanta.
C/risaaq Daahir Calasoow oo ah kabtan ku xugeenka kooxda Militariga ayaa isna dhankiisa waxa uu soo dhaweeyay saxiixyada cusub ee naadiga , wuxuuna hoosta ka xariiqay in xiddigahan ay ka mid yihiin ciyaartooyda ugu tayada fiican xiddigaha ka ciyaara horyaalka kubadda gacanta.
Geesta kale Xuseen Cismaan oo loo yaqaano bas baas kana mid ah saxiixyada cusub ee kooxda ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay ku biirista naadiga Horseed, isagoo horay ugu tirsanaa kooxda Nationlink.
Horseed ayaa galabta saxaafadda u soo bandhigtay xiddigo kala duwan oo uu qeyb ka yahay kubad qeybiyihii ugu fiicnaa ciyaarihii degmooyinka kana tirsanaa Warta Nabadda Daadi Aweys Daada iyo xiddigaha kale ee Cumar Shire, Xuseen Cismaan Dhuxuloow iyo C/Fitaax Taliyoow.
Roberto Carlos oo Daaha ka rogay sidii uu ku dhaliyay GOOLKII ay xitaa ku wareereen Khubarada Fiisikiska/ Physics!!!!